डा. केसीको धडकनमा समस्या - सिम्रिक खबर
डा. केसीको धडकनमा समस्या
काठमाडौँ — अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुटुमा हरेक मिनेटमा असामान्य धड्कन देखिएको छ । यसबाट एक्कासि मुटुले काम गर्न नसक्ने (सडन कार्डियाक एरेस्ट) जोखिम बढेको र यसअघिका अनशनभन्दा स्वास्थ्यस्थिति जटिल देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । ६४ वर्ष पुगिसकेका डा. केसीको यसअघि १५ औं अनशन २७ दिनसम्म चलेको थियो । ‘अहिले हरेक मिनेटमा एक–दुई पटक असामान्य धड्कन देखिएको छ,’ उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डा. सुवासप्रसाद आचार्यले भने, ‘असामान्य धड्कन बढ्दै जाँदा मुटुको चालमा गडबड भएर सडन कार्डियाक एरेस्ट हुन सक्छ ।’
डा. केसीलाई निमोनिया हुने सम्भावना बढी देखिएकाले शुक्रबार छातीको ‘सिटिस्क्यान’ गरिएको छ । ‘सिटिस्क्यानमा अलिकति समस्या देखियो,’ डा. आचार्यले भने, ‘छातीमा देखिएको परिवर्तन संक्रमण वा कुन कारणले हो भन्न सकिने स्थिति छैन ।’ थप समस्या पहिचान गर्न शनिबार रेडियोलोजिस्टको सल्लाह लिने तयारी रहेको उनले बताए । डा. केसी शारीरिक रूपमा अत्यन्त कमजोर भएका छन् । छातीमा दुखाइ, थकाइ, मांसपेशी दुखाइसँगै बाउँडिने, चक्कर लाग्नेजस्ता समस्या निरन्तर देखिएका छन् ।
डा. केसीको पिसाब पनि अत्यन्त कम आउने गरेको छ । रक्तचाप ९०/४० देखि ११०/६० सम्म देखिएको छ । उनले रगतको अन्य परीक्षण गराउन अस्वीकार गरेका छन् । ‘उहाँ एलर्ट (चनाखो), ओरिएन्ट (वातावरणअनुकूल आफ्नो स्थिति बुझ्ने) हुनुहुन्छ,’ डा. आचार्यले भने, ‘उहाँ सबै कुरा गर्नुहुन्छ । सुन्ने, देख्ने, निर्णय लिने, बोल्ने शक्तिमा कमी भएको छैन ।’ स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्त जटिल भएकाले जोखिम बढ्न नदिनका लागि आईसीयूमा भर्ना हुन चिकित्सकहरूले आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।